Ny hevitra fototra ao ambadiky ny fanamainana volo dia tsotra fotsiny, fa ny famokarana iray ho an'ny fanjifana betsaka dia mitaky fieritreretana mafy momba ny endrika fiarovana. Ireo mpanamboatra fanamainana volo dia tsy maintsy maminavina ny fomba mety hampiasana ny fanamainana volo. Avy eo izy ireo dia manandrana mamolavola vokatra izay azo antoka amin'ny karazany midadasika o ...
Nahatratra tampon'isa manan-tantara ny isan'ny sonia marika marika tao anatin'ny dimy taona lasa
Na inona na inona marika vaovao, marika afovoany no be mpiorina nanao sonia fifanarahana tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ny isan'ireo fifanarahana nosoniavina dia 245, fihenan'ny 40% isan-taona ary ny fitomboana ratsy voalohany tao anatin'ny dimy taona teo amin'ny tantara. Izany dia noho ny maodely fampiasam-bola madio aorina ...